Himalaya Dainik » कोरोनाले मृत्य भएपछि एक अस्पतालले लियो २६ लाख, परिवारले पाए खरानी मात्र !
41 seconds अगाडी
पोखरा । नेपालमा आज अर्थात आइतबारसम्ममा २६ हजार ६ सय ६० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । यस्तै कोरोनाका कारण नेपालमा १ सय ४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
कोरोना लागेको व्यक्तिलाई स्वास्व प्रश्वासमा समस्या हुने भएपछि अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने गरिन्छ ।अन्य सामान्य अवस्थामा भने आइसोलेसनमा बसेर उपचार हुने गरेको छ ।
कोरोना जाँच र उपचारका लागि सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको छ । कोरोना जाँचका लागि सरकारले खर्च व्यहोर्ने गरेको छ भने आफैं र संक्रमणको आशंका लागेका व्यक्तिले सरकारले तोकेको निजी अस्पतालमा उपचार गराउन पाउने छन् । तर, त्यस्ता निजी अस्पतालमा हुने उपचार निकैं महँगो पर्ने गरेको गुनासो ब्यापक हुन थालेको छ ।
हालै जनस्वास्थ्य विज्ञ डा अरुणा उप्रेतिले निजी अस्पतालहरुको लुटबारे सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् । उनका अनुसार चिनेको नातेदारका एक व्यक्तिमा कोरोना लागेको र निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा लाखौं रकम सकिएको उल्लेख गरेकी छिन् ।
‘मलाई कोरोना को सक्रमण् भएर अस्पताल जानु पर्‍यो भने त शायद घर मै मर्छु होला, काठमाडौंको एक ठूलो अस्पतालमा मेरो एक चिनेको मानिसलाई कोरोना भएर भेन्टिलेटरमा १२ दिन राखेको , २६ लाख लियो रे। उनको जीवन पनि रहेन्, एक रातमा २६ लाख अस्पातललाई दिए पछि मात्र लाश दिए, त्यसपछि सैनिकहरु आएर लगे र बिद्युतिय श-व दाह गृहमा लगे । परिवारलाई खरानी दिए। यात्रो पैसा कसरी परिवारले पायो होला रु त्यत्रो पैसा कसरी तिरेको होला ?
एक महिलाले भनेको कुरा सुनेर मलाई लाग्यो गरीब त कोरोनाले संक्रमित भएर उपचार गराउन सक्ने अबस्था छैन । मेरो पनि कोरोनाको बिमा त गरेको छ तर कोरोना भए एक लाख सम्म दिन्छ उपचारको २५ लाख कता बाट ल्याउने होला ? एक महिलाको कुरा सुनेर मलाई पनि सोच मग्न बनएको छ । कोरोना लागे अस्पातल गएर २६ लाख कसरी तिर्ने ?
धेरैले यसबारे प्रश्न उठाएको भन्दै उनले पुनः अर्को स्टाटस पनि लेखेकि छिन् ।
‘नीजि’ र सरकारीको बहस
‘कोरोनाको बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर मृत्यु हुँदा धेरै पैसा लागेछ ।’ भनेर मैले फेसबुकमा राख्दा धेरै चर्चा परिचर्चा भए । केही पत्रकारले मलाई यसको बारेमा सोधे । मैले भने “कोरोनाको बेला यती धेरै पैसा भेन्टिलेटरमा राख्दा पैसा लिएका मुद्दा अहिले आयो । तर सरकारले जनस्वास्थ्यको वास्ता नगरेर पहिले देखि नै नीजि अस्पतालले कति चाहिने नचाहिने पैसा लिइरहन्छ के थाहा छैन र ?
स्वास्थ्य मंत्रालयले “सुरक्षित मातृत्व” कार्यक्रम अंतरगत सित्तैमा सुत्केरी सेवा दिन्छ । तर त्यही सेवा ‘नीजि अस्पतालमा’ लाखौं रुपैंयामा ‘प्रदान’ गरिन्छ भन्ने स्वास्थ्य मंत्रालयलाई पक्कै थाहा छ । अझ केही मेडिकल कलेज र सरकारले करोडौं रु। दिने अस्पतालमा समेत सरकारी ‘सुरक्षित मातृत्व योजना’ स्विकार गरिएको छैन । किनभने त्यो स्विकार गरियो भने ‘सुत्केरी हुन आउने महिलाहरू सँग पैसा लिन सकिन्न । उनीहरूलाई शल्यक्रिया गर्नु पर्यो‍ भने पनि सरकारको पैसाले पुग्दैन ।
अस्पतालको मुख्य कमाई हुने नै सुत्केरी महिला, शल्यक्रिया’ बाट हो, भनेर हाका हाकि भनेको सुनिएको छ । स्वास्थ्य मंत्रालयले आफैले पैसा दिने संस्थालाई पनि “तिमीहरूले सुरक्षित मातृत्व योजना अनुरुप काम गर्नुपर्छ भनेर दबाब हाल्न किन सक्दैन?
हो, यस्तै यस्तै हुन जनलालाई सहजै रुपमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने मुद्दा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने मानसिकताबाट जनस्वास्थ्यको समस्या समाधान हुँदैन भनेर त ‘कोरोनाले देखाएको’ छ नि ? के अब पनि जनस्वास्थ्यको मुद्दा बारे छलफल गर्ने बेला भएन ? के सरकारले ध्यान देला ? कोरोनाको बेला मात्र होइन अन्य बेला पनि ?